बालाजुमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु – Allindiabc
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मुनेन्द्र थापाले ट्रक पछाडि सार्न खोज्दा पछिल्लो चक्काले किचेर गम्भीर घाइते भएका नेपालीको उपचारका क्रममा पिपल्स अस्पताल नयाँबजारमा मृत्यु भएको जानकारी दिए । मृत्यु हुने नेपाली नेपाल बैंक लिमिटेड ललितपुरमा कार्यरत भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । दुर्घटनामा संलग्न ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
Prevस्वास्थ्य दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार !
Next‘चर्चामा आउँनको लागि फोटो खिचेको होइन्’ : साम्राज्ञी